MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): Windows XP သုံးတဲ့ ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးကို ဘယ်လို Network ချိတ်မလဲ...
Windows XP သုံးတဲ့ ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးကို ဘယ်လို Network ချိတ်မလဲ...
Posted by MgHla at 4:55 pm
ဘာတွေလိုမလဲ ဆိုတော့ Network card တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ ၂-လုံး၊ ယင်း ကွန်ပျူတာ ၂-လုံးတည်းကိုပဲ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ကနေ crossover network cable တစ်ချောင်း ဝယ်ပါ... ၂-လုံးထက် ပိုမယ် ဆိုရင်တော့ switch/hub ပါ ဝယ်စရာ လိုအပ်ပါတယ်...
ကွန်ပျူတာမှာ Network card သို့မဟုတ် Network cable ကြိုးထိုးမယ့် အပေါက် မပါသေးဘူး ဆိုရင် Network Card (NIC - Network Interface Card) ဝယ်ပြီး ကွန်ပျူတာမှာ တပ်ဆင်ပါ... ယင်း NIC နဲ့ပါလာတဲ့ Driver Disk ကို အသုံးပြုပြီး Windows မှ NIC card ကို သိရှိစေရန် Install လုပ်ပေးပါ...
Network card ကို သင့် windows က သိပြီလား... သိပြီ ဆိုရင်တော့...
၁. Start » Control Panel ထဲဝင်ပါ...
၂. Network Connections ဆိုတာ တွေ့အောင်ရှာပြီး double-click ခေါက်ပြီး ဖွင့်ပါ...
၃. Local Area Connection ဆိုတာ တွေ့ရင် ထပ်ပြီး double-click ခေါက်ပြီး ဖွင့်ပေးပါဦး...
၄. Properties button ကို ကလစ်နှိပ်ပေးပါ...
၅. Internet Protocol (TCP/IP) ဆိုတာကို click ခေါက်ပြီး select လုပ်ပါ... ပြီးရင် Properties button ကို click ခေါက်ပါ...
၆. Internet Protocol (TCP/IP) Properties ဆိုပြီး နောက်ထပ် dialog box ထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်... အဲဒီထဲက Use the following IP address ကို click ခေါက်ရွေးပြီး...
၇. IP Address မှာ 192.168.0.1 ရိုက်ထည့်ပြီး Tab ခလုတ်နှိပ်လိုက်ပါ... အောက်မှာ ရှိတဲ့ subnet mask ထဲမှာ သူ့ဘာသာသူ 255.255.255.0 ဆိုပြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်... မပြင်ဘဲ ဒီအတိုင်း ထားလိုက်ပါ...
၈. ပြီးရင် OK button တွေကို click နှိပ်ပြီး ထွက်ပါ...
နောက်ထပ် ကွန်ပျူတာ ၁-လုံးအတွက်ကတော့ အပေါ်က အဆင့်တွေ အတိုင်း အဆင့်-၁ ကနေ အဆင့်-၆ အတိုင်း ပြန်သွားပါ... အဆင့်-၇ ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ IP address မှာ 192.168.0.2 လို့ ရိုက်ထည့်ပေးပါ... 192.168.0.1 လို့တော့ ထပ်မထည့်ပါနဲ့... အဲဒါဆို ဒီ ကွန်ပျူတာ ၂-လုံး အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး...
ဒီလိုဗျ... network ၁-ခုတည်းမှာ ကွန်ပျူတာတွေ အတူတူ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်လို့ ရစေချင်တယ်ဆိုရင် IP address မှာ “.” လေးတွေနဲ့ ခြားထားတဲ့ ဂဏန်း ထည့်လို့ရတဲ့ နေရာ ၄-ခု ရှိတယ် မဟုတ်လား... အဲဒီလိုပဲ Subnet mask မှာလည်း ၄-ခု ရှိတယ်...
IP Address : 192 . 168 .0. 1
အပေါ်က စာကြောင်း ၂-ကြောင်းမှာ subnet mask ရဲ့ ပထမ ရှေ့ ၃-နေရာမှာ 255.255.255 ရှိပြီး နောက်ဆုံးနေရာမှာ0ဆိုပြီး ရှိနေတယ်နော်... IP address ရဲ့ ပထမ ရှေ့ ၃-နေရာမှာ 192.168.0 ဆိုပြီး ရှိနေတယ် မဟုတ်လား... ကွန်ပျူတာတွေကို network တစ်ခုတည်းမှာပဲ ရှိနေချင်တယ်ဆိုရင် (တစ်နည်းအားဖြင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်လို့ ရချင်တယ်ဆိုရင်) ကွန်ပျူတာတိုင်းရဲ့ IP address ပထမရှေ့ ၃-နေရာဟာ 192.168.0 ဖြစ်စရာလိုအပ်ပါတယ်... နောက်ဆုံး ၄-နေရာကတော့ မတူညီတဲ့ ဂဏန်းတန်းဖိုး တစ်ခုစီ ထားပေးရပါမယ်... ဒီမှာ အကွက် တစ်ခုချင်းစီ ထဲမှာ 1 ကနေ 254 အထိ ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ကျတော့်တို့ ကွန်ပျူတာ ၂၅၄-လုံးအထိ ပါဝင်တဲ့ network တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်...
IP Address : 192 . 168 . 222 . 1
ဒီမှာ ကျတော် IP address ရဲ့ တတိယ နေရာကို 222 ပြောင်းလိုက်တယ်ဆို ကျတော်တို့ ကွန်ပျူတာတိုင်းရဲ့ IP address တတိယ နေရာတိုင်းကို 222 လိုက်ပြောင်းစရာ လိုပါတယ်... ပထမ ကွန်ပျူတာရဲ့ IP address က 192.168.222.1 ဆိုရင် ဒုတိယတစ်လုံးက 192.168.222.2 ၊ တတိယ တစ်လုံးက 192.168.222.3 ..... နောက်ဆုံး ၂၅၄-လုံး မြောက်အလုံးက 192.168.222.254 ဆိုပြီး ပေးရပါမယ်...
တစ်ခု မှတ်ထားဖို့က 192.168.222.1 ကို ကွန်ပျူတာ ၁-လုံးမှာ အသုံးပြုပြီးသားဆိုရင် နောက် ကွန်ပျူတာတွေမှာ ထပ်ပေးလို့ မရပါဘူး... ထပ်ပေးမိတယ်ဆိုရင် IP conflict ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာတွေ network အသုံးပြုလို့ မရတော့ပါဘူး...
ကိုယ်တိုင် network တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ....
မှတ်ချက် - ကျတော် network ဆရာကြီး မဟုတ်ပါ... မသိသေး မတတ်သေးသူများ အတွက်ပါ...
Labels: how to, network, windows xp
Myanmar Blues said...
ကျေးဇူး၊ ကိုမောင်လှ။ EOT လုပ်တုန်းကလိုဘဲ အသေးစိတ် ရှင်းပြထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ပညာတွေ ဝေမျှပေးတဲ့ကိုမောင်လှလို ပညာရှင်တွေ များများပေါ်ပါစေ ခင်ဗျာ။
အားပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ ကိုချိုရေ...
ပညာကတော့ လိုချင်တဲ့လူဆိုရင် ရမှာပဲ ဗျာ။ မသိတဲ့ လူတွေ လိုချင်တဲ့ လူတွေ အတွက်ကတော့ ကိုမောင်လှ အချိန်တွေ အကုန်ခံပြီး ရေးခဲ့တဲ့ Photoshop သင်ခန်းစာတွေနဲ့ နောက်ရေးမည့် သင်ခန်းစာတွေကတော့ ယူသွားတဲ့ လူတွေ အတွက်တော့ အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်။
Maung Maung Oo said...
Talay Seefar said...
udkarmifvSa&rwwfao;[email protected]@udk&Sif;[email protected];Zl;trsm;=uD;oifygw,f&Sif
10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3 စသဖြင့်လည်း သုံးနိုင်ကြောင်းပါ။ ကျနော်လည်း ဆရာကြီး မဟုတ်ရပါ၊ မှတ်ရပိုလွယ် မည်ထင်၍ ပြောမိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မျောက်အုန်းသီး ရသလို ဖြစ်နေတဲ့ မောင်လှ - ၃ ...
မျောက်အုန်းသီး ရသလို ဖြစ်နေတဲ့ မောင်လှ - ၂ ...
မျောက်အုန်းသီး ရသလို ဖြစ်နေတဲ့ မောင်လှ...
Windows XP သုံးတဲ့ ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးကို ဘယ်လို Ne...